Musharrixiinta Puntland oo shuruudo ku xiray tanaasul ay sameeyeen - Caasimada Online
Home Warar Musharrixiinta Puntland oo shuruudo ku xiray tanaasul ay sameeyeen
Musharrixiinta Puntland oo shuruudo ku xiray tanaasul ay sameeyeen
Garoowe- (Caasimada Online) Magaalada Garoowe waxaa shalay oo Arbaca ahayd, kulan ku yeeshay musharrixiinta u taagan xilka madaxtinnimada maamulka Puntland, waxaana ay soo saareen qoddobo muhiim ah.
Waxa ay musharrixiinta sheegeen kulamo maalmahan u socday iyaga iyo isimada Puntland kaddib in ay oggolaadeen guddiga xalinta khilaafaadka iyo diiwaangelinta xildhibaannada oo uu horery u magacaabay Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole.
Qoraalkan ayey murashaxiinta ku sheegeen in ay Ogolaadeen in Isimmada Soo-jireenka ah ee Puntland ay noqdaan marjica mar walba loo noqonayo iyagoo sheegay inay aqbali doonaan inuu shaqeeyo guddigii Madaxweynaha horey u magacaabay iyagoo shardi uga dhigay in Marjica kama dambeysta ah ay yihiin Isimmadii soo-jireenka ahaa ee Puntland ee horey marjica u ahaan jiray xiliyada doorashada.
Qoraalka Murashaxiinta ayaa u qornaa sidatan:
Ogeysiis: Cidii ay khuseyso
– Annagoo eegeyna danta shacabka, dalka iyo dadka Puntland,
– Annagoo qaadaneyna mas’uuliyadeena taariikheed ee ku aadan khilaafka xoogan ee ka jira doorashooyinka Dowladda Puntland ee sannadka 2014.
– Annagoo tixgelineyna imaatinka Isimmadii Puntland oo uu ugu dambeeyey Boqor Burhan Boqor Muuse.
– Annagoo dooneyna in ay dhacdo doorasho xalaal iyo cadaalad ku dhisan,
Waxaan isla gaarney:
1- In aan mas’uuliyadda khilaafkii noo dhaxeeyey annaga iyo Madaxweynaha aan ku wareejinay Isimmada Soo-jireenka ah ee Puntland.
2- In aan dooneyno in aan helno doorasho xalaal ah oo lagu kalsoonaan karo dhinac walba.
3- In aan ku ogolaano Guddiga Khilaafaadka labada shardi ee hoos ku qoran:
A- In xulashada Baarlamaanka 2013-2014 marjic looga dhigo Isimmadii aasaasey Puntland 1998dii,
B- In wixii khilaafaad ah oo kasoo baxa xulashada Baarlamaanka 2013-2014 loo soo gudbiyo Isimmadii marjica u ahaa Doorashadii 2008, sida ku cad lifaaqa, ayna go’aanka kama-dambeysta ah iyagu leeyihiin.
4- Waxaa soo jeedineynaa in lala xiriiro oo la casumo Ismmada ka maqan shirka ee soo-jireenka ah, gaar ahaan kuwa kasoo jeeda gobalada Sool iyo Ceyn.
Waxaan ku wareejinaynaa mas’uuliyadda habsami-u-socodka doorashadda guud ee Puntland 2014, isimmadda soo-jireenka ah ee Puntland oo waligood marjic u ahaa doorashooyinkii hore ee Puntland.
Arrinta Amniga doorashooyinka waa in lagu ixtiraamo loona madaxbaneeyo Taliyaha Ciidanka Daraawiishta Puntland ahna mas’uulka amniga Doorashooyinka Gen.Siciid Maxamed Xirsi (Siciid Dheere) sidii lagu heshiiyey.
14. Maxamuud Cabdiraxmaan Cuuke
15. Maxamed Cali Yusuf Gaagaab
16. Cabdullahi Daahir Maxamuud Afqurac
17. Cabdullahi Cali Xirsi
18. Xuseen Xaashi Xasan
19. Yaasiin Faarax Cartan
20. Cabdixakiim Cabdullahi Cumar Camey
21. Cali Cumar Caarshe
Waxaa Bayaankan saxiixay Guddoomiyaha Murashaxiinta:
Cabdullahi Siciid Samatar